शैलुङको बदमासी : ठेक्का म्याद समाप्त, मल आयात छैन
काठमाडौं । भदौमा २५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरीद तथा आयातको ठेक्का अलपत्र पारेको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजले दोस्रो ठेक्का पनि अलपत्र पारेको छ । शैलुङले ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयातका लागि पाएको दोस्रो ठेक्कासमेत अलपत्र पारेको हो ।
कम्पनीले गत असार १८ गते ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयातका लागि ठेक्का पाएको थियो । मल आयात गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको म्याद आइतवार सकिएको छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा मल खरीद तथा आयातको जिम्मा पाएको सो कम्पनीले समयमै मल आयात नगरी ठेक्का अलपत्र पार्ने काम भएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र भण्डारीले अब शैलुङसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिनुका साथै धरौटी रकम जफत गर्ने र कानूनबमोजिम अन्य कारबाहीको काम पनि अघि बढ्ने बताए । ‘खरीद विज्ञ तथा कानून विज्ञहरूको राय अनुसार कारबाहीको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शैलुङले धरौटीका लागि बुझाएको करीब ५ करोड रुपैयाँसमेत जफत गरिनेछ ।
यसअघि पनि कृषिले शैलुङलाई २५ हजार मेट्रिकटन युरिया मल समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटीजफत गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको थियो ।
अहिले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ४ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरीदका लागि ग्लोबल टेन्डर गरिसकेका छन्, जसमध्ये कृषिले २ लाख मेट्रिकटन युरिया, १ लाख मेट्रिकटन डीएपी र १० हजार मेट्रिकटन पोटास खरीदका लागि टेन्डर गरेको छ । यसमध्ये १० हजार मेट्रिकटन पोटास नेपाल भित्रिसकेको छ भने २० हजार मेट्रिकटन डीएपी आयातको क्रममा छ ।
३० मेट्रिकटन युरिया अबको १५ दिन कोलकाता आइपुग्ने कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी साल्टले पनि ८० हजार मेट्रिकटन युरिया, ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी र ५ हजार मेट्रिकटन पोटास खरीदका लागि टेन्डर गरिसकेको बताइएको छ ।
बंगलादेशबाट मल किन्ने सरकारको निर्णय
बंगलादेशले पैंचोमा मल दिन आनाकानी गरेपछि त्यहीँबाटसरकारले अन्ततः मल किन्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि गत भदौ १६ गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि पैंचोमा मल ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्लो समय बंगलादेश सरकार पैंचो मल दिने विषयमा पछि हटेपछि सरकारले मल किनेरै ल्याउने निर्णय गरेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यका अनुसार यसअघि पैंचोमा ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मलका विषयमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भए पनि अन्तिम समयमा बंगलादेश सरकार पूर्वसहमतिबाट पछि हटेपछि किनेरै भए पनि ल्याउने निर्णय भएको हो । यसरी किनेर ल्याउँदा नेपाललाई प्रतिमेट्रिकटन २० देखि २५ डलर सस्तो पर्ने अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए । बंगलादेशले अन्य देशबाट किनेर ल्याएको मल नेपालले खरीद गरेर ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
मल कारखाना खोल्ने तयारी
सोमवारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा मल कारखाना खोल्न तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ । कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसका लागि खाका तयार पारिसकेको बताइएको छ ।
सीताराम गोकुल मिल्क्स रू. ५ करोड लगानी थप्दै*[२०७७ माघ, १३]
पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने उखु किसानको चेतावनी[२०७७ माघ, ११]
सामान आयातमा समस्याले सौन्दर्य व्यवसायी मर्कामा[२०७७ माघ, २]
६ वर्षे अवधिमा कीर्तिपुरमा बने ३ हजार ५ सयभन्दा बढी नयाँ घर[२०७७ माघ, २]